Biography ka Pierre Pierre
Igama likaPeter Richard liyazi abantu abadala kunye nabantwana. Kwaye konke oku, mbulela amafilimu amangalisayo, afaka i-biography kaPetros. I-Biographie kaRichard inokusixelela malunga neendima ezininzi ezidlala kakuhle. Nangona kunjalo, i-biographie kaParry Richard kunye nabaninzi baziwa. Emva koko, eli lizwi elidabukisayo, isiFrentshi esinjalo "satshatyalaliswa, sisuka kwisibhedlele iBasyana", intando yezigidi zabantu ababukeli emhlabeni jikelele. Kodwa ke, i-biography kaPeter Richard inezinto ezininzi. Kakade ke, akubona wonke umntu owaziyo ngamnye. Ngoko ke, kwinqaku esiza kuxoxa ngayo ngeziganeko ezahlukeneyo ebomini bukaRichard. Masikhumbule kokubili kwiminyaka yobuntwana bukaPetros nobutsha bakhe. Ewe, i-biography yalo mdlali ungathatha inani elikhulu lamaphepha. Ngoko ke, siyazama ukukhetha ubuncinane ubuncinci obuvela kubomi bukaRichard.
Ngoko, i-biography yalomntu yaqala phi? Umhla wokuzalwa kukaPetros ngowesi-16 ku-Agasti 1934. Ukuba sithetha ngegama elipheleleyo likaRichard, elalifumene ngexesha lokuzalwa, livakala ngathi uParis Richard Maurice Charles Leopold Defhey. Iqela elidumileyo elidumileyo laseFransi lalivela kwidolophu encinane yaseValenciennes, esenyakatho yeFransi. Uyise kaRichard wayebandakanyeke kwishishini lokugqoka. Kufuneka kuphawulwe ukuba intsapho yakhe yayindala kakhulu kwaye iyimfihlakalo, ngoko ke, ookhokho bakaPeter ukusuka kwisizukulwana ukuya kwisizukulwana badlulisela ulwazi lwabo lokuphuhlisa ishishini kunye nokwanda kwenkunzi. Kodwa, nanko uyise kaRichard waye "igusha elimhlophe" kwintsapho yakhe. Inyaniso kukuba wayenengqondo ebukhali, kwaye unokuphindaphinda amaxesha amaninzi karhulumente. Kodwa, ngelishwa, uyise kaRichard wayemthanda ukusela, ahambe kwaye adlale kwiintlanga. Ngenxa yoko, ngoxa uPetros wayeselula kakhulu, uyise wayedula phantse yonke inzuzo yakhe, waza wahamba, washiya umfazi wakhe nendodana ukuba ahlale noyise. Umkhulu wakhe, ngokungafani noyise, wayeyindoda enobuqili nobutyebi. Ngoko ke, ukususela ebuntwaneni bakhe, yonke into yayihlala kunye noPetros. Wafunda kwindlu yebhodi apho athatyathwa khona kwi-limousine. Kubonakala ngathi le nto ibona yintsapho efanelekileyo. Kodwa, eneneni, ubuncwane uRichar abuzange bancede, kodwa banqandwa. Wafunda kunye nabafana abazali babo ababengabalimi kunye nabavukuzi, ngoko ke, babenomdla kumntwana osisityebi, ocacile ngokuchasene nemvelaphi yabo. Kwaye uRitshar wayengathandi, kuba akazange acinge imali yakhe njengento elungileyo okanye embi. Bekunjalo bonke, kwaye akufanele ukuba baphenjele ubudlelwane bakhe kunye nabahlobo bakhe. Ukubonisa abafana ukuba unjengomntu wonke kwaye unokuba ngumhlobo naye, uRichard waqala ukuhleka aze ahlalise abafundi bakhe. Bawuthanda, kwaye kungekudala, uPiekrr waba ngowakhe. Yile ndlela uRichard aqala ngayo ukusebenzisa it talente yakhe yokwenza okokuqala ngangoko waqonda ukuba inokusetyenziswa kuye. Ngendlela, loo mfana akazange enze kuphela ngaphambi kokuba afunde nabo. Xa utatomkhulu waqokelela iindwendwe ezivela kwiindawo eziphakamileyo, uRichard wayezifunda ngokubanzi kwimidlalo, imibongo kunye nangaphezulu. Kwaye bonke abo babeya kwimibutho eya kufuneka ibanjwe ngokunyanisekileyo le ntombazana, bamncoma. Ngoko, sinokuthi abaphulaphuli bokuqala kunye, uhlobo oluthile lwabalandeli, babonakala kuRichard, xa wayeselula kakhulu.
Akulungelelwanga ngethemba leentsapho.
Konke oku kwakhokelela ekubeni uPetros wayevutha ngcamango yokufunda kwiikhosi ezimangalisayo. Kodwa xa waxelela abazali bakhe noomkhulu ngale nto, kwenzeka into yokuba loo mntu wayengalindelanga. Utatomkhulu wayevutha nje. Wayecinga ukuba le midlalo yinto efanelekileyo yokuzonwabisa, kodwa ngokucacileyo ayikho uhlobo lobugcisa obulungele ukwenza ebomini. Wayecinga ukuba loo nto yayiyafana noyise, kwaye wayedinga indoda eyayingakwazi ukuqhuba ishishini lentsapho. Ekubeni uPetros wayengumntwana kuphela, ngokulandelanayo, nguye obenokwenza. Kodwa uRichard akazange afune ukuba yintoni intsapho yakhe yabona. Ngoko ke, waqokelela izinto zakhe waya eParis. Umfana akazange avume nokuba ukhulu-ntloko wayesebenzile kwaye wayethembisa ukuba akayi kunika ngokubanzi nayiphi na imali yokuhlala kunye nokutya. UPeter akazange ahlale engaxhaswanga. Kwaye, xa, okokuqala, ndingangena kwiikhosi ezimangalisayo, andizange ndilahle phantsi izandla zam, ndibuyele ekhaya ngento enetyala, ukwenza into engayithandiyo. Esikhundleni salokho, wazibamba ngesandla, wangena kwiikhosi zobugcisa obuhle bukaCharles Dyullen, waza wada wadlulisela umsebenzi kwiindawo ezidumileyo uJean Vilar. Ngoko, sinokuthi oko ngenxa yoko, loo mfana ufumene oko wayefuna kakhulu. Kodwa, xa eqala ukudlala kwi-theater, waphinde wadumala, kuba akazange anike indima ephambili. Kwaye uPetros wayephupha nje ngabo. Nangona kunjalo, ndandidla ngokuphambana ngokwenza i-movie. Kodwa, kude kube yinto enokwenzeka, yena nomhlobo wakhe babhala iindawo ezihlaziyekileyo kunye nabantu abaxubekileyo kwinqanaba, benethemba kwaye, ekugqibeleni, yonke into yayiza kutshintsha kwaye yayiza kuba ngumdlali odumiweyo obenenkwenkwezi.
Ukufunyanwa kwe talente nguYves Robber.
Njengoko sibona, kungekudala, kwenzeka. Ngo-1968, uPeter wadibana nomlawuli uYves Robber. Nguye owamzukisa uRichard kuwo wonke umhlaba. Impumelelo kuPeter yavela emva kwefilimu ethi "UAlesandro Wenenelo". Baqala ukumqonda ezitalatweni, ukuthatha i-autographs. Kodwa, ihlabathi lonke laqala ukuthetha ngePerte emva kokuhlaziya umdlalo omhle weRobber "Ibomvu elide emzimbeni omnyama." Ngoko uRichard waba ngumsindo onobuhlungu, uhlobo olusisigxina oluhlala luhlala kwiimeko ezidibanisa kwaye luyakha, nangona kunjalo, akalindele. UPetros wachitha iminyaka engamashumi amathathu edlala abantu bakhe, abaxuba abantu kunye neengqungquthela zezenzo kunye neziganeko ezenzeka kuzo. Zonke iintetho kunye nokuthatha inxaxheba kuye zavuya kwaye zafumana impumelelo enkulu kubaphulaphuli. Kwaye, ngokukodwa, abaninzi bathanda ukubetha kweenkwenkwezi kunye noGerard Depardieu. Ngokungafaniyo nomlingiswa, ukubonakala, imifanekiso, aba babini abadlali beFrentshi abancinci bancedisa ngokukrakra kwaye bakha kwiimifanekiso ezinokwenene ezingenakulibaleka kwaye ezihlekisayo. Kungenxa yoko, bahamba ngeenkwenkwezi ezininzi, kungekho nanye ehlulekayo kwiofisi yebhokisi.
UPetros uthanda kakhulu iRashiya kwaye unenkwenkwezi ezininzi kwiifilimi ezenziwa ngamaRashiya kunye namaFrentshi. Wayenabalingane obomi abane, kukho oonyana ababini kunye nabazukulwana babini kunye nomzukulu, owamthanda nje. UPierre akaphuzi kakhulu kwaye akabheki. Uyayithanda indlela enjalo yobomi kwaye akaze akhononde nantoni na.
I-Biography yomculi uKylie Minogue
Iindaba zakutshanje malunga nabadumileyo
Biography kaVasilyeva Catherine
Umdlali weFrench uCatherine Deneuve
Iimvumi ezidumileyo zaseMerika
Indlela yokutya emva kokutya kokunciphisa umzimba
Iimpawu ezinhlanu: iimveliso ezifunekayo kwimenyu "ekhulelwe"
Isaladi kunye nobhontshisi abamnyama
Iintambo zeefestile zeentambo zeenwele ezimfutshane
Konke malunga nokulimala kokukhipha isisu
Isobho seklabishi yokulahlekelwa kwesisindo
Inkukhu i-soufflé neekroti kwi-oven microwave
Yiyiphi ipesenteji yabasetyhini abanako ukufumana ama-orgasms amaninzi?
Iimpawu ezisetyenziswayo zewayini elibomvu
Iingcebiso eziza kukunceda ukugcina ixesha elide lomntu
Ukupheka kwezitya ezimnandi nezilula
Jongana neemaski nge-oatmeal
Isaladi kunye nenkukhu kunye ne-pasta
Isisu esisisigxina, ukutya kunye nenzuzo yesisu